हाम्रो लागि लेख्नुहोस् र योगदान गर्नुहोस् सडकको लागि एक युगल
एक हुनमा रुचि छ योगदानकर्ता लागि सडकको लागि एक युगल?
हामी सधैँ यात्रा ब्लगरहरू खोज्दैछौं जसले तिनीहरूको अनुभव योगदान गर्न र उनीहरूको कथाहरू साझा गर्न चाहन्छ! हामी भावुक यात्रीहरू बोल्न खुला छौँ जसले सफलतापूर्वक आफैलाई व्यक्त गर्न सक्छ, र विषयका विशेषज्ञहरू तिनीहरूले बारेमा लेख्न चाहन्छन्।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि हामी वाणिज्यिक पोष्ट वा लि for्कहरूको लागि सोध्नुहोस्। हाम्रो अतिथि पोष्टिंग केवल को लागी हो साथी ब्लगरहरू, जसको हामी दृश्यता प्राप्त गर्न सहयोग गर्न खुसी छौं।
योगदान कसरी गर्ने:
तलको सम्पर्क फारममा तपाईंको रुचि बुझाउनुहोस्।
हामी केवल 1,000 शब्दहरूको सबभन्दा कम सबमिशनहरू स्वीकार गर्छौं मौलिक कार्य.
हामी तपाईंलाई अनुरोध गर्दछौं कि फोटोहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईंसँग प्रयोग गर्न कानूनी अधिकार छ। अर्को शब्दमा, कि त तपाइँको क्यामेराको साथ लिइएको, खरिद गरियो, वा क्रिएटिभ कमन्स / पिक्सबे, पेक्सेल्स, आदिबाट लिइएको हो।
फोटो MUST ल्यान्डस्केप अधिक-ठाडो रूपमा तुलना गर्नुस्।
हामी एक उत्कृष्ट हेडर फोटो चाहन्छौं, र हरेक 250 शब्दहरूको लागि कम्तीमा एक फोटो। (अन्य शब्दहरुमा, हामीलाई 1,000 शब्द पोष्टको लागि चार फोटोहरु चाहिन्छ)।
यदि तपाईंसँग फोटोहरू छैनन् भने, यो एक सम्झौता-ब्रेकर छैन। हामी सामान्यतया जुनसुकै तस्बिरहरू आवश्यक छ पूरै पूरै गर्न सक्दछौं।
हामी व्याकरण त्रुटिहरू वा ढाँचा मिलाएर लेख सम्पादन गर्न अधिकार सुरक्षित गर्छौं।
यद्यपि, कहिल्यै टुक्राको सत्यता परिवर्तन गर्नुहोस्।
तपाईंले टुक्राको थप पदोन्नतिलाई अनुमति दिनुहुन्छ, त्यसोभए लेखकको रूपमा जम्मा गरिएको छ (जस्तै विज्ञापन, सम्बद्ध लिंक, सामाजिक साझेदारी, आदि ...)।
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि योसँग कस्तो राम्रो मेहमान पोष्ट लेख्न थाल्छ भने, तल हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्! हामी तपाईंसँग काम गर्न उत्सुक छौं!
नाम कृपया आफ्नो नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्।
इमेल कृपया मान्य इमेल प्रविष्ट गर्नुहोस्।
तिम्रो सन्देश कृपया सन्देश प्रविष्ट गर्नुहोस्।
कृपया रोबोट हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि गर्नको लागि क्याप्चा जाँच गर्नुहोस्।
सन्देश पठाइयो! सन्देश असफल भयो। फेरि प्रयास गर्नुहोस।